“ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘုရင့်နောင် လက်ထက်ကဲ့သို့ပင် ယနေ့ချိန်တွင်လည်း အင်အားကြီးမားနေတဲ့ မြန်မာ့တော်ဝင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့များ – New Of Burmese
“ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘုရင့်နောင် လက်ထက်ကဲ့သို့ပင် ယနေ့ချိန်တွင်လည်း အင်အားကြီးမားနေတဲ့ မြန်မာ့တော်ဝင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့များ
2019 ခုနှစ် Glabal Fire Power အဖွဲ့ကြီး၏ ကမ္ဘာ့စစ်အင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၇ နိုင်ငံ ရှိတပ်မတော်များတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏အလုံးစုံစစ်အင်အားပါဝါမှာ အဆင့် ၃၇ ရှိခဲ့သည်။(30-6-2019)တကမ္ဘာလုံးမှာရှိသည့် တပ်မတော်စစ်သည်အင်အားအဆင့်တွင် စစ်သည်အင်အား (၄၀၆၀၀၀) ဖြင့် အဆင့် (၁၁) သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။စစ်လက်နှက်အင်အား ။ ကမ္ဘာ့တပ်မတော်များ၏ရွေ့ ရှားအမြောက်ကြီးများအင်အားတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးပေါင်း (၁၅၈၂) လက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၁၁) ဆင့်မြောက် အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
တရုပ်နိုင်ငံ၊ ရပ်ရှားနိုင်ငံ ၊ မြောက်ကိုရီးယား ၊ အိန္ဒိယ ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအမြောက်တပ်ဖွဲ့များနောက် အာရှ အဆင့် (၆) ဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင် ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် ၊အင်ဒိုနီးရှားတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အဆင့် (၁) အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။မန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ အမြောက်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဆုံးရွေ့လျားအမြောက်ကြီးပေါင်းေ ထာင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့ (၁၁)ဆင့် မြောက် အမြောက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်မှာ ယခုအချိန်မှာသာအင်အားကြီးမားထက်မြက်သည်မဟုတ်၊ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့ကြောင်း အောက်ဖေါ်ပြပါမှတ်တမ်းများက သက်သေပြခဲ့သည်။
၁၆ ရာစုနှစ်ဦးတွင် အာရှတခွင်တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့သော မဟာဧကရာဇ်ကြီး ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ၏တပ်မတော်ကြီးသည် (AD ၁၅၆၃ BE ၉၂၅ ) ခုနှစ်တွင် ၊ မြန်မာ့အချုပ်အချာအာဏါကိုထိပါးကျူးကျော်လာသော ယိုးဒယား နိုင်ငံ သို့စစ်ချီတက်ခဲ့သည်။ဆင်တပ် ၊ မြင်းတပ် ၊ ခြေလျင်တပ် ၊အမြောက်တပ်ဖွဲ့များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်ပေါင်း ငါးဆယ်နှင့်ဘုရင့်တပ်မတော်ကြီးကို ,,,ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးဘုရင့်နောင်၏ သွေးသောက် ညီနောင် ဘုရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဦးစီးသော တပ်တော်ကြီး (၆) တပ်ဖွဲ့စည်း၍ ၊ နိုင်ငံပြင်ပ ပြည်ပစစ်ဆင်နွဲရာတွင်ဖွဲ့စည်းရသော တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ,,,တပ်တော်ကြီး(၆ ) တပ်၏ တပ်တော်စုမှူးအဖြစ် ဧကရာဇ်ကြီးဘုရင့်နောင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍ ယိုးဒယားနိုင်ငံသို့ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးတွင် တိုက်ဆင်ပေါင်း ၅၃၀၀ ၊ တိုက်မြင်းပေါင်း ၅၃၀၀၀ ၊ အမြောက်စိန်ပြောင်းလက်နှက်များနှင့် စစ်သည်ပေါင်း ငါးသိန်းလေးသောင်းကျော်ပါဝင်သည်။အင်အားကြီးမားလှသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်တော်ကြီး (၆)တပ်ကို ဘုရင့်နောင်ကိုယ်တိုင် တပ်တော်များ၏တပ်တော်စုမှူးအဖြစ်၎င်းထီးဆောင်းမင်းဘုရင်များ၏အရှင် မဟာဧကရာဇ် ကြီးအဖြစ်၎င်းဦးစီး၍ယိုးဒယားသို့ချီတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့သည်။
(ထိုစဉ်ကဟံသာဝတီနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံခြားသား ဗင်းနစ်မြို့သားကုန်သည်”ကိုင်ဇာဖရက်ဒရစ်ကေ ” က,ပဲခူးမင်း(ဘုရင့်နောင်)သည် ယိုးဒယားမင်းကိုအောင်နိုင်ရန် စစ်သည်တသန်းလေးသိန်းဖြင့်ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ “Purchas His Pilgrine . val .x. p.118 )
ဘုရင့်နောင်၏ယိုးဒယားချီစစ်ပွဲကြီးတွင် အရေးပါဆုံးနေရာမှပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောတပ်ဖွဲ့မှာ –“မြန်မာ့တော်ဝင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့” ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ခန့်မှစကာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သောမြန်မာ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ခေတ်သစ်မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် , ရန်သူတို့၏အခိုင်အမာ ကွန်ကရစ်ဘန်ကာကြီးများ ၊တပ်စခန်းများ ၊စခန်းတောင်ကုန်းများအား ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးများဖြင့်ပြင်းထန်လှသောပစ်အားဖြင့် ချေမှုန်းပျက်စီးစေပြီး တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ချီတက် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ရှေးခေတ်မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ များသည်လည်း ရန်သူတို့၏ကြီးမားခိုင်ခံတောင့်တင်းလှသော ခံကတုတ်များ ၊ မြို့ရိုးကြီးများအား မြေပြင်အမြောက်ကြီးများ၏ပစ်အားဖြင့်ချေမှုန်းခြင်း အပြင်
ယိုးဒယားမြို့ရိုး၏အမြင့်နှင့်ညီမျှသော ဘီးတပ်အမြောက်ပစ်စင်ကြီးများပြုလုပ်၍ ပစ်စင်ပေါ်တွင် အမြောက်တပ်သားနှင့်အမြောက်ကြီးများတင်စေပြီး စစ်သည်များကတရွေ့ရွေ့တွန်းကာ ဆွဲကာဖြင့် ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးများအဖြစ်ဖန်တီးပြီး မြို့ရိုးအနားကပ်ခါ အမြောက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ဖေါက်ခွဲ၍ မြို့ရိုးကိုပျက်စီးစေပြီးမှ တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်များ ၊ ဆင်တပ်မြင်းတပ်များ ဖြင့်ဝင်ရောက်ချေမှုန်းခဲ့ပြီး နန်းတော်နှင့်မြို့တော်အားအောင်ပွဲဆင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရှေးမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏မြင့်မားလှသောသေနင်္ဂဗျူဟာများပင်ဖြစ်သည်။ရှေးဟောင်း မြန်မာ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့၏အောင်ပွဲခံစစ်ပွဲများပင်ဖြစ်သည်။ဘုရင့်နောင်၏တပ်မတော်ကြီးတွင် “ဆင်တပ်သားများ ၊မြင်းတပ်သားများ ၊ လှံတပ်သားများနှင့်အမြောက်တပ်သားများသည် စံနစ်ကျ၍ ကောင်းမွန်သောတပ်များဖြစ်သည်။အရေအတွက်အားဖြင့် မခန့်မှန်းနိုင်အောင်ရှိသည်။အမြောက်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ စစ်ပွဲများတွင် အမြောက်ပေါင်း ရှစ်သောင်း ခန့်သုံးသည်။ နေ့စဉ်လည်းတိုးပွားနေသည်၊ အမြောက်ပစ်ခတ်မှုကိုနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်စေကာ ယင်းကဲ့သို့အစဉ်မပြတ်လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံး ပစ်မှတ်များကိုပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရင့်အမြောက်တပ်တွင် အကောင်းဆုံးသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အမြောက်ကြီးများရှိသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားရော အာဏာပါ ပဲခူး (ဟံသာဝတီ)မင်းထက် သာလွန်နိုင်မည့်သူမရှိဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် , ပဲခူးမင်းလက်အောက်တွင် သရဖူဆောင်းသော ထီးဆောင်းမင်းဧကရာဇ် ( ၂၆ )ပါး အခစားရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ” ဟူ၍ ဤခေတ်အခါက ဟံသာဝတီပဲခူးသို့ရောက်ခဲ့သော ဗင်းနစ်ကုန်သည် “ကိုင်ဇာဖရက်ဒရစ်ကေ”ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ (Purchas His Pilgrime .val .x . pp .124-125 )စံပြုယူစရာအတိတ်သမိုင်းမှတ်တမ်းနှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့များတွင် အဆင့် ( ၁၁ ) သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ အား ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ပါသည် ။ ။
မှီငြမ်းကိုးကား ။၁ ၊ မြန်မာ့သတင်းထူးသတင်းဦးများ ။ စကော့တ လန် နိုင်ငံရောက် ရှေးဟောင်းမြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်ကြီးများ ။၂ ။ People Media .မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ။၃ ။ အခြေပြမြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း – ပဌမတွဲ၎ ။ မှန်နန်း မဟာရာဇဝင် သုံးတွဲ ပေါင်းချုပ် ။
PLK🇲🇲 အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
2019 ခုနှဈ Glabal Fire Power အဖှဲ့ကွီး၏ ကမ်ဘာ့စဈအငျအား အဆငျ့သတျမှတျခကျြအရ နိုငျငံပေါငျး ၁၃၇ နိုငျငံ ရှိတပျမတျောမြားတှငျ မွနျမာ့တပျမတျော၏အလုံးစုံစဈအငျအားပါဝါမှာ အဆငျ့ ၃၇ ရှိခဲ့သညျ။(30-6-2019)တကမ်ဘာလုံးမှာရှိသညျ့ တပျမတျောစဈသညျအငျအားအဆငျ့တှငျ စဈသညျအငျအား (၄၀၆၀၀၀) ဖွငျ့ အဆငျ့ (၁၁) သတျမှတျခွငျးခံရသညျ။စဈလကျနှကျအငျအား ။ ကမ်ဘာ့တပျမတျောမြား၏ရှရှေ့ားအမွောကျကွီးမြားအငျအားတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့သညျ ရှလြေ့ားအမွောကျကွီးပေါငျး (၁၅၈၂) လကျဖွငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ (၁၁) ဆငျ့မွောကျ အငျအားအကွီးဆုံးအမွောကျတပျဖှဲ့အဖွဈသတျမှတျခွငျးခံရသညျ။
တရုပျနိုငျငံ၊ ရပျရှားနိုငျငံ ၊ မွောကျကိုရီးယား ၊ အိန်ဒိယ ၊ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံအမွောကျတပျဖှဲ့မြားနောကျ အာရှ အဆငျ့ (၆) ဖွဈပွီးအရှတေ့ောငျအာရှတှငျ ၊ ထိုငျး၊ ဗီယကျနမျ ၊အငျဒိုနီးရှားတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး အဆငျ့ (၁) အငျအားအကွီးဆုံးအမွောကျတပျဖှဲ့ အဖွဈသတျမှတျခွငျးခံရသညျ။မနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့သညျ ၁၉၄၉ ခုနှဈမှစ၍ အမွောကျတပျဖှဲ့အဖွဈစတငျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီးနောကျ နှဈပေါငျး (၇၀) ကြျောတှငျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့မွငျ့ဆုံးရှလြေ့ားအမွောကျကွီးပေါငျးေ ထာငျကြျောပိုငျဆိုငျခဲ့သော ကမ်ဘာ့ (၁၁)ဆငျ့ မွောကျ အမွောကျတပျဖှဲ့ဖွဈခဲ့ပွီဖွဈသညျ။မွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့၏ စဈရေးစှမျးရညျမှာ ယခုအခြိနျမှာသာအငျအားကွီးမားထကျမွကျသညျမဟုတျ၊ ရှေးယခငျနှဈပေါငျးမြားစှာကပငျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ထိပျတနျးရောကျခဲ့ကွောငျး အောကျဖျေါပွပါမှတျတမျးမြားက သကျသပွေခဲ့သညျ။
၁၆ ရာစုနှဈဦးတှငျ အာရှတခှငျတှငျပွိုငျဘကျကငျးခဲ့သော မဟာဧကရာဇျကွီး ဘုရငျ့နောငျကြျောထငျနျောရထာ၏တပျမတျောကွီးသညျ (AD ၁၅၆၃ BE ၉၂၅ ) ခုနှဈတှငျ ၊ မွနျမာ့အခြုပျအခြာအာဏါကိုထိပါးကြူးကြျောလာသော ယိုးဒယား နိုငျငံ သို့စဈခြီတကျခဲ့သညျ။ဆငျတပျ ၊ မွငျးတပျ ၊ ခွလေငျြတပျ ၊အမွောကျတပျဖှဲ့မြားဖွငျ့ဖှဲ့စညျးထားသော တပျပေါငျး ငါးဆယျနှငျ့ဘုရငျ့တပျမတျောကွီးကို ,,,ဧကရာဇျဘုရငျကွီးဘုရငျ့နောငျ၏ သှေးသောကျ ညီနောငျ ဘုရငျ ဗိုလျခြုပျကွီးမြားဦးစီးသော တပျတျောကွီး (၆) တပျဖှဲ့စညျး၍ ၊ နိုငျငံပွငျပ ပွညျပစဈဆငျနှဲရာတှငျဖှဲ့စညျးရသော တပျမတျောဖှဲ့စညျးပုံအတိုငျးဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ,,,တပျတျောကွီး(၆ ) တပျ၏ တပျတျောစုမှူးအဖွဈ ဧကရာဇျကွီးဘုရငျ့နောငျကိုယျတိုငျဦးစီး၍ ယိုးဒယားနိုငျငံသို့ခြီတကျတိုကျခိုကျခဲ့သညျ။
မွနျမာ့တပျမတျောကွီးတှငျ တိုကျဆငျပေါငျး ၅၃၀၀ ၊ တိုကျမွငျးပေါငျး ၅၃၀၀၀ ၊ အမွောကျစိနျပွောငျးလကျနှကျမြားနှငျ့ စဈသညျပေါငျး ငါးသိနျးလေးသောငျးကြျောပါဝငျသညျ။အငျအားကွီးမားလှသော မွနျမာ့တပျမတျော၏ တပျတျောကွီး (၆)တပျကို ဘုရငျ့နောငျကိုယျတိုငျ တပျတျောမြား၏တပျတျောစုမှူးအဖွဈ၎င်းငျးထီးဆောငျးမငျးဘုရငျမြား၏အရှငျ မဟာဧကရာဇျ ကွီးအဖွဈ၎င်းငျးဦးစီး၍ယိုးဒယားသို့ခြီတကျတိုကျခိုကျသိမျးပိုကျအောငျပှဲဆငျနိုငျခဲ့သညျ။(ထိုစဉျကဟံသာဝတီနပွေညျတျောသို့ရောကျရှိခဲ့သော နိုငျငံခွားသား ဗငျးနဈမွို့သားကုနျသညျ”ကိုငျဇာဖရကျဒရဈကေ ” က,ပဲခူးမငျး(ဘုရငျ့နောငျ)သညျ ယိုးဒယားမငျးကိုအောငျနိုငျရနျ စဈသညျတသနျးလေးသိနျးဖွငျ့ခြီတကျတိုကျခိုကျခဲ့သညျဟု မှတျတမျးတငျခဲ့သညျ။ “Purchas His Pilgrine . val .x. p.118 )
ဘုရငျ့နောငျ၏ယိုးဒယားခြီစဈပှဲကွီးတှငျ အရေးပါဆုံးနရောမှပါဝငျတိုကျခိုကျခဲ့သောတပျဖှဲ့မှာ –“မွနျမာ့တျောဝငျအမွောကျတပျဖှဲ့” ဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး ၄၅၀ ကြျောခနျ့မှစကာ ကမ်ဘာကြျောခဲ့သောမွနျမာ့အမွောကျတပျဖှဲ့ဖွဈသညျ။ခတျေသဈမွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့သညျ , ရနျသူတို့၏အခိုငျအမာ ကှနျကရဈဘနျကာကွီးမြား ၊တပျစခနျးမြား ၊စခနျးတောငျကုနျးမြားအား ရှလြေ့ားအမွောကျကွီးမြားဖွငျ့ပွငျးထနျလှသောပဈအားဖွငျ့ ခမြှေုနျးပကျြစီးစပွေီး တိုကျခိုကျရေးတပျဖှဲ့မြား ခြီတကျ တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျအောငျပှဲဆငျခဲ့ကွသကဲ့သို့ရှေးခတျေမွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့ မြားသညျလညျး ရနျသူတို့၏ကွီးမားခိုငျခံတောငျ့တငျးလှသော ခံကတုတျမြား ၊ မွို့ရိုးကွီးမြားအား မွပွေငျအမွောကျကွီးမြား၏ပဈအားဖွငျ့ခမြှေုနျးခွငျး အပွငျ
ယိုးဒယားမွို့ရိုး၏အမွငျ့နှငျ့ညီမြှသော ဘီးတပျအမွောကျပဈစငျကွီးမြားပွုလုပျ၍ ပဈစငျပျေါတှငျ အမွောကျတပျသားနှငျ့အမွောကျကွီးမြားတငျစပွေီး စဈသညျမြားကတရှရှေ့တှေ့နျးကာ ဆှဲကာဖွငျ့ ရှလြေ့ားအမွောကျကွီးမြားအဖွဈဖနျတီးပွီး မွို့ရိုးအနားကပျခါ အမွောကျကွီးမြားဖွငျ့ပဈခတျဖေါကျခှဲ၍ မွို့ရိုးကိုပကျြစီးစပွေီးမှ တိုကျခိုကျရေးစဈသညျမြား ၊ ဆငျတပျမွငျးတပျမြား ဖွငျ့ဝငျရောကျခမြှေုနျးခဲ့ပွီး နနျးတျောနှငျ့မွို့တျောအားအောငျပှဲဆငျသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့သညျ။
ရှေးမွနျမာစဈခေါငျးဆောငျမြား၏မွငျ့မားလှသောသနေင်ျဂဗြူဟာမြားပငျဖွဈသညျ။ရှေးဟောငျး မွနျမာ့အမွောကျတပျဖှဲ့၏အောငျပှဲခံစဈပှဲမြားပငျဖွဈသညျ။ဘုရငျ့နောငျ၏တပျမတျောကွီးတှငျ “ဆငျတပျသားမြား ၊မွငျးတပျသားမြား ၊ လှံတပျသားမြားနှငျ့အမွောကျတပျသားမြားသညျ စံနဈကြ၍ ကောငျးမှနျသောတပျမြားဖွဈသညျ။အရအေတှကျအားဖွငျ့ မခနျ့မှနျးနိုငျအောငျရှိသညျ။အမွောကျမြားသညျအကောငျးဆုံးဖွဈသညျ၊ စဈပှဲမြားတှငျ အမွောကျပေါငျး ရှဈသောငျး ခနျ့သုံးသညျ။ နစေ့ဉျလညျးတိုးပှားနသေညျ၊ အမွောကျပဈခတျမှုကိုနတေို့ငျးလကေ့ငျြ့စကော ယငျးကဲ့သို့အစဉျမပွတျလကေ့ငျြ့ခွငျးကွောငျ့လညျးအကောငျးဆုံး ပဈမှတျမြားကိုပဈခတျနိုငျခွငျးဖွဈသညျ။
ဘုရငျ့အမွောကျတပျတှငျ အကောငျးဆုံးသတ်တုမြားဖွငျ့ပွုလုပျထားသညျ့အမွောကျကွီးမြားရှိသညျ။အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရလြှငျ ကမ်ဘာပျေါတှငျ အငျအားရော အာဏာပါ ပဲခူး (ဟံသာဝတီ)မငျးထကျ သာလှနျနိုငျမညျ့သူမရှိဟု ဆိုနိုငျပသေညျ။အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော , ပဲခူးမငျးလကျအောကျတှငျ သရဖူဆောငျးသော ထီးဆောငျးမငျးဧကရာဇျ ( ၂၆ )ပါး အခစားရောကျခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျ ” ဟူ၍ ဤခတျေအခါက ဟံသာဝတီပဲခူးသို့ရောကျခဲ့သော ဗငျးနဈကုနျသညျ “ကိုငျဇာဖရကျဒရဈကေ”ကမှတျတမျးတငျခဲ့သညျ။ (Purchas His Pilgrime .val .x . pp .124-125 )စံပွုယူစရာအတိတျသမိုငျးမှတျတမျးနှငျ့ ကမ်ဘာ့အငျအားအကွီးဆုံးအမွောကျတပျဖှဲ့မြားတှငျ အဆငျ့ ( ၁၁ ) သတျမှတျခွငျးခံရသော မွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့ အား ဂုဏျပွုရေးဖှဲ့ပါသညျ ။ ။
မှီငွမျးကိုးကား ။၁ ၊ မွနျမာ့သတငျးထူးသတငျးဦးမြား ။ စကော့တ လနျ နိုငျငံရောကျ ရှေးဟောငျးမွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျကွီးမြား ။၂ ။ People Media .မွနျမာ့တပျမတျောအမွောကျတပျဖှဲ့ ။၃ ။ အခွပွေမွနျမာ့နိုငျငံရေးသမိုငျး – ပဌမတှဲ၎ ။ မှနျနနျး မဟာရာဇဝငျ သုံးတှဲ ပေါငျးခြုပျ ။
PLK🇲🇲 အား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ ပေးပါသညျ။
Previous Article မြေရှားသတ္တု အ​မေရိကန်ပြည်တွင်းမှာတူးဖော်တော့မည် ( ကိုယ့်မြေ ကိုတူးပြီး သာကောတို့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဈေးကွက်ကို ဖြိုတော့မှာလား အမေရိကန် )
Next Article စင်္ကာပူအခက် မြန်မာအချက် ဖြစ်တော့မှာလား…?